NEWS COLLECTION: ဘိန်းမြေဖြစ်သွားတော့မယ့်တောင်ဇလပ်မြေ
ဆောင်းနှင်းတွေဖွေးလာရင် ချင်းတောင်တခွင်လုံး တောင်ဇလပ်ပန်းနီပွင့်ဖတ်ကြီးတွေက အလှချယ်မြန်း ထားသလို ပန်းချယ်ရီ တွေက လည်း အလှဆင်မြန်းထားတတ်ကြတယ်၊ ပန်းချီဆရာတွေက အလှချယ် ထားတာမဟုတ်ပဲ သဘာဝက အလှဆုံး မွန်းချယ်ပေးထား တာပါ။ လေအလာမှာ ထင်းရှူးရနံ့တွေ ချင်းတောင်တခွင်လုံးသင်းနေတတ်စမြဲပါ။မတ်စောက်လွန်းတဲ့ကျောက်ကပ်ပါးတွေဟာ ပြည်ပရန်တွေ ၀င်မလာနိုင်အောင် ချင်းပြည်ကို ကာဆီးပေး ထားပါတယ်။ ရန်သူဝင်လာပြီ ဆိုရင် အရှေ့ဖက် ကင်းသမား(မျောက်)တွေက အသံပေးသွားတတ်တယ်၊ အနောက်ဖက် ကင်းသမား (မျောက်လွဲကျော်)ကလည်း တပ် လှန့်သွားတတ်ပါတယ်၊ ချင်းတောင်တနံ တလျားကိုအောက်ချင်းငှက်တွေက အတောင်ပံဖြန့်ကျက်ပြီး ကင်းလှည့်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါ တချိန် ကပါ။
ယနေ.ချင်းတောင်ရဲ့ သဘာဝအလှဆိပ်သုန်းလုနီးပါးဖြစ်နေပါပြီ၊ ဌါနေကျန်ချင်းလူမျိူးတွေရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ အနေအထိုင် အဖြူရောင် စိတ်ဓါတ်တွေဟာ အရောင်အမျိူးမျိူးစွန်းထင်းသွားပြီ၊ တချိန်က ယာမီးခိုးဟာ စိုက်သီးနှံတွေအတွက် ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ခုချိန်မှာတော့ ဘိန်းပင် တွေအတွက်ဖြစ်နေခဲ့ရပါပကောလား။
တချိန်က စိမ်းစိုနေတဲ့ သီးနှံစိုက်ခင်းတွေဟာ ယခုအခါ ဘိန်းစိုက် ခင်းတွေ ကလွှမ်းမိုး အုပ်စိုးလာနေ ပါပြီ။ ဒီလိုဖြစ်လာတာဟာ ချင်းပြည် သူတွေက ဖန်တီးထားတာမဟုတ်ပဲ နအဖက စီးပွါးရေးအရသော် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးအရသော်လည်းကောင်း အမြတ်ရရှိမည်ဟု ယူဆရသော တချို့ လက်နက်ကိုင် အုပ်စုတို့နဲ.ပူးပေါင်းပြီး ချင်းပြည်နယ် အထက်ပိုင်း တွန်းဇံမြို့နယ်မှာ ဘိန်းပင်တွေစိုက်ပျိူးနေကြ လို့ပါ။
ငွေများတရားနိုင်ဆိုသလို ချင်းလူမျိူးတွေရဲ့ လူမှုဘ၀တွေကို ငွေစက္ကူက တဖြည်းဖြည်းအနိုင်ပိုင်းလိုက် ပါပြီ၊ တချိန်က ချင်းပျိူဖြူတွေရဲ့ အောက်ချင်းငှက်သစ္စာကို ငွေစက္ကူက ဖျက်ဆီးနေပါပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်စိုက်ပျိူးလာခဲ့ကြတဲ့ အဲဒီဘိန်းပင်တွေဟာ ယခုလက်ရှိမှာ ဧက ပေါင်း ၁၀ဝဝ ကျော်ခန့်ရှိနေပြီဟု ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ အမည်မဖေါ်လိုသူ ဒေသခံတဦးရဲ့အဆိုအရ သိရပါသည်။
“ဘိန်းပင်တွေကို အဓိကစိုက်ပျိူးကြတဲ့နေရာတွေကတော့ တွန်းဇံမြို့နယ် အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်ဘက်မှာ တည်ရှိတဲ့ Singpial(ရှင်းပီလိုင်)၊ Zunglawn (ဇုံးလောင်း)၊ Phaisat(ဖိုင်ဆပ်)၊ Suanghawih စတဲ့ကျေးရွာတွေအပြင် အခြားစိုက်ပျိူးတဲ့ကျေးရွာ များလည်းအများအပြား ရှိနေတယ် ”လို့အဆိုပါ ကပြောပါတယ်။
တချို့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တွေ အဲဒီကျေးရွာအနီးအနားမှာ စခန်းချထားပြီး သူတို.ရဲ.ဘိန်းစိုက်ခင်းတွေ ကိုကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှု ပြုလုပ် နေကြပါတယ်။ ဒေသခံချင်းပြည်သူတွေကလည်း တနေ.ထက်တနေ. စားဝတ်နေရေးကြပ်တည်းသည့် ပြသနာကြောင့် ဘိန်းလုပ်ကွပ် တွေမှာ သူတို့ရဲ့ ဘ၀ကို နှစ်မြုပ်နေရ တော့တဲ့ အနေအထားမျိုးကို ရောက်ရှိသွားကြတော့တယ်။
အငတ်ဘေးတွင်းထဲမှာရုန်းကန်နေကြတဲ့ချင်းပြည်သူကို ငွေကြေးတွေနဲ.မြူဆွယ်ပြီး နေ.စားလုပ်အားခ တွေ ဈေးကောင်းကောင်းပေးပြီး ချင်းပြည်သူတွေအတွက် အဆိပ်ပင်ဖြစ်လာမည့်ဘိန်းပင်တွေကို သူတို. ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိူးခိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။
"တောင်ယာလုပ်ခုတ်တဲ့နေရာတချိူ.တွေမှာဘိန်းစိုက်တဲ့အခါကျတော့ တောင်ယာလုပ်လို့မရတော့ဘူး၊ ပြည်သူတွေကလဲ ငွေများများ ရတဲ့ ဘိန်းလုပ် ငန်းကိုဘဲပိုလုပ်ချင်ကြတော့တယ်၊ လုပ်ခများများရတော့ ယင် သူတို.ကိုသူတို.ဟုတ်လှတယ် လို.ထင်နေကြတော့တာပေါ့ ၃နာရီ ၄ နာရီကြာ ဘ်ိန်းခင်းမှာ အလုပ် လုပ်ရင် ၁၅၀၀၊ ၂၀၀၀ ရကြတယ်။ သူတို.တော်တော်ပျော်နေတယ်ပေါ့ ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ရ တဲ့အတွက်တော် တော်များများ စားဝတ်နေရေးပြေလည်တဲ့သူတွေလဲရှိတာပေါ့လေ" ဟု ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လေ့ အဆို ပါဒေသခံ ပြောပါတယ်။
အခုလိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဘိန်းပင်တွေကိုစိုက်ပျိူးနေရသည့်အတွက် ဒေသခံချင်းလူငယ်တချို.ဘိန်းစိမ်း များကို စားသုံးတတ်လာပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ.ဘိန်းစွဲသူများပြားလာနေတယ်၊ သူတို့လေးတွေရဲ့အနာဂတ် ဟာ အလွန်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်ဟုသူက ဆက်ပြော ပါတယ်။
"ရင်နာစရာဘဲ တကယ့်ရင်နာစရာဘဲ ဘိန်းစိမ်းတွေကိုတွန်းဇံမြို့နယ် Sialthawzang ရွာ၊ Dimzang ရွာကနေ တဆင့် ကလေးမြို.နယ်တ၀ိုက်။ ရေနံမှော်တွေမှာဖြန့်ကြတယ် Dimzang ရွာကလူငယ် တွေဆိုရင် ဘိန်းစွဲပြီးမှကြည့်မကောင်းသည့်အဆင့်အထိ တောင့်ဖြစ်နေကြပီပေါ့လေနော်၊ လူငယ်ယော ကျာ်းလေးတော်တော်များများပိန်ချူံးပြီးမှအိမ်ထဲမှာဘဲကုပ်နေရတဲ့အဆင့်ဖြစ်နေပြီ ဒါ တောင် ဘိန်းခင်း တွေစိုက်ပျိူးတဲ့နေရာမဟုတ်သေးဘူး ဘိန်းတွေကို သယ်ယူဖောက်ကားနေတဲ့လမ်းပေါ့" ဟုသူကဆက် ပြောပါတယ်။
ယခုကဲ့သို. နအဖစစ်အစိုးရက တချို့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ နှင့်ပူးပေါင်းပြီး ချင်းပြည်နယ်တွင် ဘိန်းစိုက် ပျိုးခြင်းပြုလုပ်တာဟာ ချင်းလူမျိူး တွေ အတွက်အစစအရာရာ ဆိုးရွားလာနိုင်ဖွယ်သာရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပြည်ပမှာအခြေစိုက်နေတဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ.အစည်းများ ချင်းနိုင်ငံရေး အဖွဲ.အစည်းများ မှဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းပြီး ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ဆိုတာ လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို.သူကပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓိကဘိန်းစိုက်ပျိူးကြသည့် ပြည်နယ်များမှာ ရှမ်းပြည်နယ် နှင့် ကချင်ပြည်နယ် တို.ဖြစ်ကြသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကပြီး ချင်းပြည်နယ်အထက်ပိုင်းတွန်းဇံမြိုနယ် မဏိပူရ်ပြည်နယ်စပ်ဘက်တွင် မြန်မာအာဏာပိုင်များနှင့်သဘောတူညီမှု ရယူထားသည့် လက်နက်ကိုင် သူပုန်တချို့ က ဘိန်းစတင်စိုက်ပျိူးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ချင်းတောင်တွင် စစ်အစိုးရက လက်ဘက်စိုက်ပျိုးရေး စီမံကိန်းနှင့် ခြံစည်းရိုးကြက်ဆူပင် စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖေါ်လုပ် ဆောင်နေ သော်လည်း လက်တွေ့ မှာ အပင်မရှိသည့် ဆိုင်းဘုတ်လှလှဖြင့် တပ်ထားသော ပုံများကိုသာ နေရာအနှံ့ တွေ့ ရသည်။ စစ်အစိုးရက ချင်းပြည်နယ်မှာ မည်သည့် စိုက်ပျိုး ရေးကို အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်မလဲ ဆိုသည့် အစီအစဉ်ဖြင့် ဘိန်းစိုက် ပျိုးရေးကို စတင်နေသလား။
ချင်းလူငယ်တွေရဲ့ ဘ၀ကို ဖျက်ဆီးပြီး စစ်အစိုးရက အဖြူရောင်နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် ပြည်နယ်ဟာ ကမ္ဘာက ဘာနယ်မြေအရောင်သတ်မှတ်ပေးလာမလဲဆိုတာကို ချင်းလူမျိူးအတွက် တွေးစရာမေးခွန်းဖြစ်နေပါသည်။
၂၀၀၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ဘီဘီစီသတင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၀၆ခုနှစ်ကနေ ဘိန်းစိုက် ပျိုးနှုန်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်နေ ကြောင်း ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ ကမ္ဘာတဝန်းတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်သည် ဘိန်းအများဆုံး ထုတ်လုပ်သည့် နိုင်ငံဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ သည် ဒုတိယ အများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုနည်းတူ ကမ္ဘာက နာမည်ဆိုးတဆိပ်များပေးထားသည့် နိုင်ငံများလိုပင် ချင်းတောင်ဟာလည်း တောင်ဇလပ်မြေ ကနေ ဘိန်းမြေအဖြစ် သို. စစ်အစိုးရက အစီအစဉ်ရှိရှိ သွတ်သွင်းနေသည်ကို ချင်းလူထုက သတိထားသင့်ပေသည်။